Ungashandura sei JPG kuti ive PDF paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Tichatsanangura maitiro atinga shandure mifananidzo kuti ive JPG kune PDF fomati Nenzira iri nyore. Kana iwe uchifunga kuita inochinja chiito, iwe unogona zvakare kuve unofarira iyo yekuraira chirongwa chirongwa chinodaidzwa kuti pdfimages kurasa iyo mifananidzo iri mune iyo PDF kune JPEG fomati. Asi izvo zvatiri kutsvaga muchinyorwa chino zvakangopesana, kuenda kubva kuJPG kuenda kuPDP nechishandiso chiri nyore sezvatichakwanisa kuona. Nenzira, kune mamwe mawebhusaiti ekuti uite mhando iyi yekutendeuka zvizere online uye zvemahara ...
Kuti tiite rudzi urwu rwekutendeuka tinofanirwa kuisa pasuru mune yedu yepamoyo distro imagemagick kana pasuru gscan2pdf, zvinoenderana nekuti isu tinoda yekuraira nzira nzira kana graphical nzira. Kuisirwa kuri nyore, iwe unongofanirwa kushandisa maturu manejimendi ekushandisa anoshandiswa nekuparadzira kwauri kushandisa uye kuisa pasuru nezita rayo sekuratidzira kwataita apa, uye kana yaiswa chete, izvozvi tinoenda kumatanho iwe aunofanirwa kuteedzera kuti ugone kushandura imwe kana yakawanda mifananidzo yeJPG muPDF.
1 Chinja JPG kuita PDF kubva kuraira tambo:
2 JPEG kune PDF shanduko uchishandisa graphical interface:
Chinja JPG kuita PDF kubva kuraira tambo:
Kana iwe wakasarudza iyo yekuraira mutsara sarudzo uye iwe waisa iyo imagemagick package, mune iyo kesi, kana yaiswa chete, isu tinogona kuwana mukana kune akateedzana eanoshanda anoshanda raini tambo maturu uye sarudzo. Tichaenda kushandisa mutemo wekushandura kuita shanduko. Chokwadi ndechekuti ine huwandu hwesarudzo, saka ndinokurudzira kuti uongorore bhuku racho.
Asi chakanyanya kukosha chinhu, zvinova ndizvo zvatiri kutsvaga nedzidziso iyi, kungave kuita shanduko kubva kudhairekitori uko kunowanikwa mufananidzo kana mifananidzo. Semuenzaniso, fungidzira kuti isu tinoda kushandura iyo yese mifananidzo mune / yekumba dhairekitori kune PDF kana imwe chete. Kune izvi unogona kushandisa yekutanga kana yechipiri yemirairo inotevera:
Mune yekutanga, ese maJPEG mifananidzo inoendeswa kamwe chete kuPDF uye mune yechipiri chete imwe chete inowirirana izita iro. Iwe unogona zvakare kushandisa kumanikidza neiyo + compress, -rotate sarudzo kutenderedza mufananidzo nemadhigiri iwe aunodoma se paramende, nezvimwe. Semuenzaniso, unogona tenderera mufananidzo 90 madhigirii uye wedzera kumanikidza nemirairo inotevera:
Asi kana mirairo isiri yako chinhu, saka unogona kuenderera kune chinotevera chikamu ...
JPEG kune PDF shanduko uchishandisa graphical interface:
Kufunga kuti tatova neiyo gscan2pdf chirongwa, ngatione kuti maitiro acho ari nyore. Matanho ndeaya:
Tinowedzera mifananidzo kana isu tinosarudza dhairekitori iyo mifananidzo yatinoda kushandura iri.
Kana tawedzerwa, tinogona dzora zvekare nekuzvuva kubva pachiratidziri chikuru chekushandisa, kubva pane runyorwa rwemifananidzo inoonekwa kuruboshwe chete
Kana tangoiswa muhurongwa tinogona kubaya pane bhatani Sevha kusevha.
Iye zvino skrini ichaonekwa kwatinogona kusarudza akawanda zvisarudzo, kusanganisira kuchinja metadata yePDF, kuwedzera zita, zuva, mhando, munyori, sosi, nezvimwe. Kunyangwe zvisiri zvakafanira kuzadza ivo kana tisingade. Izvo zvakakosha kusarudza ese kana isu tichida kushandura iyo yese mifananidzo semapeji ePDF uye mune yekubuda fomati sarudza iyo PDF format, sezvo inotsigira mamwe mafomati ...
Tinobvuma uye ichagadzira iyo PDF nemifananidzo yedu.
Ndinovimba yakubatsira, kune mamwe mazano kana kusahadzika, usakanganwa kuenda makomendi ako...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Nzira yekushandura JPG kuti ive PDF paLinux
Zvakanakisa. Ndatenda neruzivo.
Ini ndashandisa iyo sarudzo
chinja * .jpg zita.pdf
uye yakangoita zvayaida: kushandura uye kubatanidza zvese zvifananidzo zve jpg kuita pdf faira rimwe chete.
Pindura kuna laurencio
JUAN ANTONIO DIAZ akadaro
Yakanaka kwazvo posvo, yaibatsira kwazvo. Kutenda nekugovana.
Pindura kuna JUAN ANTONIO DIAZ
Iyo "yakapusa" inoteverwa nemutsetse wekuraira, ndinoona ichipesana. Izvo zvinofungidzirwa kuti isu tese tinoziva zvinhu zvakawanda nezve iyo terminal, iyo Sudo, iyo inofara dhairekitori yekuisa mafaera, nezvimwe. asi ini ndinogara ndichisangana nedambudziko.
Nyore chingave chinhu chinoonekwa uye chinonzwisisika, zvimwe zvese ichiri iyo linux yemagirazi.
pombi yekuisa img2pdf
img2pdf -o inobuda.pdf input.jpg
Pindura kuna debianitaferoz
Yakanaka app, ndatenda nerubatsiro.
Yakanaka app, ndinokutendai zvikuru.